Articles – Sixah Academy
Cuntooyinka ugu muhiimsan ee ay tahay inay qaadato hooyo uur leh Hooyada uurka leh waxay ubaahan tahay in ay hesho cuntooyin nafaqaysan isla markaana dheeli tiran , si ay uwanaagsanaato xaalada caafimaad ee hooyada iyo ilmaha. Cunista cunto nafaqaysani waxay ka qayqaadata korintaanka jidheed iyo maskaxeed ee ilmaha. Koriinka …
May 30, 2018	Articles, Uncategorized 0
Qeexidda : waa xaalad ku dhacda qofka marka uu si is dabajooga u quuto cunto aan ka koobnayn xadigii nafaqada ee saxda ahaa ee jidhku u baahnaa. Qaybaha nafaqadarrada Waxa jira labo qaybood oo waawayn oo nafaqadarradu u qaybsanto:- Booratiinka iyo tamarta oo ku yaraada : waa marka uu …
April 2, 2018	Articles 0
1.0 Hepatitis B waa xanuunka ay soomalidu u taqaan [ joonis cadka amaba cagaarshowga]. Waxa keena virus loo yaqaan Hepatitis B Virus [HBV]. Virus kani waxa uu weeraraa beeraka kuna keena caabuq amaba infection. 1.1 sidee ayuu caam u yahay xanuunkani? Waxa lugu qiyaasaa in ka badan 275 million oo …
Jidhka aadamigu si uu noqodo mid caafimaad qaba waa in uu helaa cunto dheeli tiran oo ka kooban qaybaha kala duwan ee cuntada. Haddab si uu jidhku helo cunto dheeli tiran cuntaas waxa la gu muujiyeye qaab saddex xagalka(triangle) ah kaas oo ka kooban shanta qaybood ee cuntada dheeliga tiran …